Dad shacab ah oo ku dhintay gaari lagu rasaaseeyay Sh/Dhexe | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dad shacab ah oo ku dhintay gaari lagu rasaaseeyay Sh/Dhexe
Dad shacab ah oo ku dhintay gaari lagu rasaaseeyay Sh/Dhexe
Cadalle (Halqaran.com) – Gaarigaan oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ookusii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rag hubeysan ay ku rasaaseeyeen degaan hoostaga degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in gaariga oo ah nooca loo yaqaano Leyla Calaawi uu siday dad rakaab ah, balse xilli uu marayay tuulada Bashaqle oo hoostagata degmada Cadale uu ku dhacay rag ay isbaaro u taallay deegaankaas, waxaana muran ka dhashay ragga hubeysan oo lacag doonayay ay sababtay in gaariga la rasaaseeyo.
Inta la xaqiijiyey rasaastaas ay kooxaha hubeysan fureen ayaa waxaa ku geeriyooday wadihii gaarig, kaas oo lagu Magacaabi jiray Farxaan Xersi Baseey.
Raggii hubeysnaa ee gaariga rasaaseeyay ayaa goobta isaga baxsaday, iyada oo meydka Ninka ku dhintay rasaasta loo qaaday deegaanka Godinlabe oo la sheegay in uu deegaan ahaan kasoo jeedo.
Mararka qaar ayaa Gaadiidka ku safra deegaanno ka tirsan gobolka Shabellaha Dhexe ayaa waxaa ay la kulmaan kooxo burcad ah oo u geysta falal isugu jira dhac iyo in la rasaaseeyo taas oo keenta waxyeelo soo gaara rakaabka.
Weli kama aysan hadlin falkan maamulka degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana horay u jirtay in deegaanno kale oo hoostaga degmadaasi ay ka dhaceen in dhac loo geysto dadka Shacabka ah.
Gaari lagu rasaaseeyay Shabeellaha dhexe